BUDDHIST TERMS' Dictionary: STRAIGHTENING ONE’S VIEW - ဒိဋ္ဌိဇုကမ္မ
STRAIGHTENING ONE’S VIEW - ဒိဋ္ဌိဇုကမ္မ
ဒိဋ္ဌိဇုကမ္မ (Ditthijukamma)- အယူဝါဒ ခံယူချက်ကို ဖြောင့်မတ်အောင် ပြုခြင်း။
ပညာရှိကို ဆည်းကပ်ခြင်း၊ တရားစကား နာကြားခြင်း၊ တရားစာပေ လေ့လာဖတ်ရှုခြင်း၊ ချင့်ချိန်စဉ်းစား တွေးခေါ်ခြင်း စသည်တို့ဖြင့် ဖြောင့်မတ်သော အသိအမြင် ကမ္မဿကတာ ဉာဏ်သည် ဒိဋ္ဌိဇုကမ္မ မည်၏။ ကမ္မဿကတာဉာဏ်ခေါ် အယူမှန်ကို ဖြောင့်မတ်အောင် ပြုပေးနိုင်အောင် ခိုင်မာသော သဒ္ဓါတရားကိုလည်း ဒိဋ္ဌိဇုကမ္မ ဟု ခေါ်ရသည်။
ဘာသာ, အယူဝါဒ ခံယူချက် ဖြောင့်မှန်ရေးသည် သတ္တ၀ါတိုင်းအတွက် အရေးအကြီးဆုံး ဖြစ်သည်။ အယူဝါဒ ဖြောင့်မတ်သူမှ ပြုလုပ်သမျှ အကျိုးဖြစ်ထွန်းသည်။ သို့ဖြစ်၍ ပညာရှိကို ဆည်းကပ်ခြင်း စသည်ဖြင့် ဘာသာ အယူဝါဒ ခံယူချက်ကို ဖြောင့်မှန်တည့်မတ်အောင် ပြုအပ်၏။
STRAIGHTENING ONE’S VIEW
Forming correct view
Associating with the wise, hearing the discourses, reading and studying the discourses and proper reflection and analysis can straighten one’s view. This knowledge which straightens one’s view, the kammassakata nana, is called ditthijukamma.
Correctness in religious conviction is of paramount importance to all beings. Only the one with firm conviction will gain benefits from his actions. One should therefore findawise person, and get one’s religious views straightened.